IsticmaalkaHub: Sii oo hel Qaabab ama Jawaab celin Isticmaal | Martech Zone
Isticmaalka Hub: Sii oo hel Qaabab ama Jawaab celin Isticmaal
Arbaco, Juun 1, 2015 Arbaco, Juun 1, 2015 Douglas Karr
Waxaan ka helnay Tag Suuq Geynta shir goboleed uu qabtay Qaybta Saddexaad. Waxay ahayd dhacdo fantastik ah oo ay ku jiraan saf aan caadi aheyn oo kuhadlaya dhiirigalin iyo aqoonyahanno. Mid ka mid ah dadkii hadlay ayaa ahaa Oli Gardner, la aasaasihii Iska daa kuwaas oo isku duubay hal heck oo ah bandhig ku saabsan muhiimada iyo saameynta imtixaanku.
Waxaan la wadaagi doonnaa qaar ka mid ah soo bandhigida uu Oli ku bixiyay qoraalada soo socda, laakiin waxaan doonayay inaan la wadaago mid ka mid ah aaladaha uu noogu sheegayo inuu runtii jecel yahay… IsticmaalkaHub. UsabilityHub waxay kuu ogolaaneysaa inaad wadaagto nashqadeynta astaantaada ugu dambeysay si aad u aragto saameynteeda, la wadaag noocyo kala duwan oo bog ah si aad u aragto midka la doorbidayo, ama aad ka hesho jawaab celin halka ay isticmaaleyaashu mari karaan bartaada si ay wax uga helaan.
Waxaad awoodi kartaa saxiixdo iyada oo aan wax lacag ah lagaa qaadin oo aad noqoto isticmaale barta si aad u siiso jawaab celin isticmaaleyaasha kale. Jawaabaha tijaabiyeyaasha aad casuuntay waa bilaash. Jawaabaha laga dalbaday bulshada UsabilityHub waxay ku kacayaan 1 deyn midkiiba. Jawaabaha ka imanaya tijaabiyeyaasha tirakoobka gaarka ah waxay ku kacaysaa 3 dhibcood midkiiba. Labadiinaba waad ku kasban kartaa dhibco adoo u tijaabinaya kuwa kale ama waad iibsan kartaa taada. Haddii aad xubin xubin ka noqoto, waxaad helaysaa 50% qiimaha dhibcaha.
Waa kuwan tusaale wanaagsan oo shirkad ay ku tijaabinayso doorbidista tab tab ee boggooda:
UsabilityHub waxay leedahay 4 Imtixaan oo Isticmaal ah oo aad kala dooran karto
Shan Imtixaan Labaad - Imtixaan Shan Second ah ayaa ku tusaya qaabkaaga tijaabiyaha kaliya shan ilbidhiqsi. Shanta ilbiriqsi ka dib markay dhammaato, tijaabiyaha waxaa la weydiinayaa su'aalo taxane ah oo aad sheegto, sida Waa maxay sheyga aad u malaynayso inay shirkaddani iibinayso?, ama Muxuu ahaa magaca shirkaddu?.
Guji Tijaabada - Diiwangalinta Tijaabada Tijaabada halka isticmaaleyaashu guji nashqaddaada. Tijaabiyaha waxaa laga codsanayaa inuu raaco tilmaamaha aad sheegto, sida Halkee ayaad gujineysaa si aad u eegto gaarigaaga wax iibsiga?, ama Halkee ayaad gujin lahayd si aad u doorato shaxanka bartaada?.
Tijaabada Xulashada - Tijaabooyinka Tixraacyada waxay weydiinayaan tijaabiyaha inuu kala doorto labada qaab beddelidda naqshadeynta. Waxaad weydiin kartaa tijaabiyeyaasha inay wax ku doortaan iyagoo ku saleynaya sifo gaar ah (tusaale. Naqshadee u muuqataa mid lagu kalsoonaan karo?), ama si fudud u weyddii waxa ay doorbidayaan guud ahaan.
Imtixaanka socodka Nav - Nav Flow Tests ayaa go'aamiya in tijaabiyeyaashu ay si guul leh ugu dhex mari karaan naqshadeyntaada. Waxaad gelineysaa taxane ah nashqadaha bogga, oo sheeg halka tijaabiyaha ay tahay inuu gujiyo si uu u sii wado Heerka guusha iyo guuldarada ee tijaabiyeyaasha ayaa lagu duubay tallaabo kasta.
Tags: fikradda naqshadeyntaopinionhub isticmaaltijaabinta isticmaalkatijaabada isticmaalaha
Shotfarm: Shabakadda Mawduuca Waxsoosaarka ee Sumadaha iyo Soosaarayaasha
Muhiimadda Telefoonnada Loogu Yeedho Safarka Macaamiisha